Sei Kurega Pizza Yako ... er ... Chigadzirwa Zvitengese Chayo Pamhepo | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 16, 2015 China, Gumiguru 29, 2020 Douglas Karr
Shamwari yangu yakanaka, James, muridzi weBrozinni Pizzeria. Ini handisi kuzo tenderera - zviri pachokwadi iyo yakanakisa New York dhizaini pizza muIndy. James akatibatsira kunze zvishoma, achiunza kushamisika kwake Indianapolis pizza rori kune fundraiser gore rapfuura uye catering chiitiko chiri kuuya svondo rino isu tine. Mukudzoka, takatanga kumugadzirira saiti.
Patakatanga kugadzira saiti, isu takaziva kuti paive nechinhu chimwe chete chakakosha - kurega chikafu chiite iko kutaura. Pizza ndicho chikafu chakakwana chemaphikicha - iine mavara anoshamisa aunogona kunhuwidza nekungotarisa. Sei iwe uchivanza mifananidzo mumafuru madiki pane saiti izere nekufamba, mabara epadivi, uye imwe nzvimbo yakatambiswa? Tichishanda naJames nechikwata chake, takasarudza kugadzirisa uye kugadzirisa iyo inoshamisa theme yekudyira izvo zvinodhura zvakanyanya.
Isu tingave takavaka yetsika theme - asi chokwadi ndechekuti haina kukodzera kuedza zvekare. Vagadziri vemusoro vari kungoita inoshamisa basa kuvaka misoro inoshanduka inotengesa nezviuru asi izvo zvinogona kuve zvakagadziriswa zvakanyanya sezvatakaita nenzvimbo yaBrozinni. Dingindira rinouya nezvose zvinobatsira:
Photoshop mafaera muchiitiko chaunoshuvira kugadzirisa magiraidhi ekutanga ashandiswa.
Parallax marongero izvo zvinonakidza kufamba uye nekupa yakakwira mwero yekugona.
Kugamuchira dhizaini zvinotaridzika serakanaka pane mbozhanhare kana piritsi sezvazvinoita pa desktop.
Shortcuts iyo inobvumidza mabhatani, akatsemura akapatsanura, mifananidzo uye marongero emakoramu.
Dutu remwana yakavakirwa mukati kuitira kuti iwe usafanirwa kupfuura uye nekugadzirisa iwo wepamoyo theme - ayo anowanzo gadziridzwa nerutsigiro kana chengetedzo kuburitswa.
Iyo domain yakaitirwa paNetwork Solutions saka takafunga kuenda neWordPress kuitisa imomo… kukanganisa kukuru. Isu takapererwa nebandwidth tichingogadziridza iwo theme theme! Pandakakumbira rubatsiro kubva kuchikwata chavo chekutsigira, vaida kundisimudzira pane rutsigiro rwehunyanzvi uye kuti vandishevedze mumaawa ekushanda. Ugh.
Ini ndakaruma bara ndokuisa saiti pane yakazara yekugamuchira hurongwa, yakamanikidza mifananidzo yese uchishandisa Kraken, uyezve yakagadzirirwa WP Rocket kubatsira kumhanyisa saiti. Tichaona maitirwo azvo nemavhiki mashoma anotevera tisati tafunga kana tichifanira kuchinjisa kune wemuenzi akanaka.
Pazasi mutsara: Izvo zvaive zvisina kuomarara kana kudhura kuvaka rakasarudzika saiti ine rakakura dingindira uye avhareji yekutambira. Ticharamba takatarisa izvozvi kuti saiti iyi inoita sei nekutsvaga, zvemagariro, uye nekutakura maodha!
Tags: brozinnipataniweb Designweb site
Socialdraft: Yako Yemagariro Media Karenda uye Yekuburitsa Platform
Jun 22, 2015 pa 10: 22 PM
Douglas - Iyo webhusaiti yemaresitorendi inotaridzika zvinoshamisa, zvisinei zvichibva pane chinyorwa chinyorwa chandaitarisira kukwanisa kuenda kumenyu uye kuona kuti chikafu chega chega chinotaridzika sei mumifananidzo! Pane kudaro yaive "menyu yepapuratifomu imwe chete" ndinoda kutaura newe nezve kuti Crave.ly iri kubatsira sei kuchinja izvi uye kubatsira maresitorendi kubata mamenu avo pamhepo nemifananidzo kuratidza chikafu sezvawakataura, rega chikafu chitaure. !
Jun 22, 2015 pa 10: 42 PM
Mhoro Bryan, zvinonaka! Isu hativabatsire nekushingaira asi munogona kusvika muone kana vachizvifarira. Isu takangoita hurongwa hwavakumbira.